Yellowstone's Treasure Cabin #1 e Gardiner, MT - I-Airbnb
Yellowstone's Treasure Cabin #1 e Gardiner, MT
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOlga & Noah
UOlga & Noah yi-Superhost
Ikhabhinethi ye-Yellowstone's Treasure iyinxalenye yepropathi ekusingathwa kuyo iikhabhini ezisi-7 ezitofotofo nezikhethekileyo ezineminyango yabucala.
Iikhabhini zibekwe ngaphakathi kwemizuzu emi-2 xa uqhuba usuka eNorth Entrance ye-Yellowstone National Park kwidolophu encinci yase-Gardiner, kwiphondo lase-Montana.
Iindawo zokutyela ezininzi, imivalo, iposi, ibhanki kunye nemisebenzi eyahlukeneyo ibekwe kumgama wokuhamba.
Iikhabhathi zikwajikelezwe bubomi basendle kunye notyelelo oluthe gqolo oluvela kubathandekayo kunye ne-elk eyadini.
Ikhabhathi inegumbi lokuhlala elinomabonakude, itafile yokutyela kunye nefuton, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela. I-WiFi yoncedo inikezelwe.
Ikhitshi ibandakanya i-cooktop induction, i-microwave, ifriji, i-rice cooker, i-toaster, i-oven ye-toaster, umshini wekhofi, i-kettle, i-blender, i-waffle maker, i-grater, iipani kunye neembiza, iipleyiti kunye neekomityi, iiglasi, izitya, i-ice cream scoop, i-opener, i-silverware. , umgqomo wenkunkuma, itawuli yekhitshi, itawuli yephepha, isepha yesitya, iibrashi zokutya.
Ikofu kunye neti ziyancomeka.
Ifakwe ngokufanelekileyo ngebhedi enye yokumkanikazi kwigumbi lokulala kunye ne-futon kwigumbi lokuhlala inika abantu aba-4 ukulala. Ingubo eyongezelelweyo, imithwalo, iilinen zinikezelwa.
Iindwendwe ziya kufumana igumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye namanzi ashushu unyaka wonke. I-Shampoo, i-gel yokuhlamba inokufumaneka kwi-dispenser kwi-shower. Sibonelela ngeetawuli ezinkulu, iitawuli zesandla & zobuso, ilaphu lokuhlamba kunye nokwenza itawuli.
Isixhobo sokomisa iinwele kunye ne-steamer yempahla nazo zikhona.
Iikhabhathi zethu zinobubele kunye nabantwana. Sinebhedi enye kunye nesitulo esiphakamileyo esinye. Nceda uzicele xa uzibekele indawo kwikhabhini yakho.
Sikunikeza ukuba usebenzise idesika eqhelekileyo ukuphumla. Ime phakathi kwekhabhin #2 kunye ne #3.
Kukho indawo yokupaka echongiweyo yasimahla kwipropathi.
Ukufudumeza kunye ne-air conditioning ibonelela unyaka wonke.
Izilwanyana zasekhaya kunye namaqela azivumelekanga ngaphakathi kwi-cabin. Siyakuxabisa ukuthobela kwakho lo mgaqo kunye nokuqonda ukuba ukuwaphula kuya kubangela ukuba iindwendwe zihlawuliswe i-500 yeedola zokucoca.
Indawo egqibeleleyo yokujonga iindawo ezijikelezileyo:
Imizuzu emi-2 ukuqhuba ukuya ekungeneni eMantla kweYellowstone Park
10 min drive ukuya kwiBoiling River
Imizuzu eli-10 ukuqhuba ukuya eYellowstone Hot Springs eCorwin Springs
30 min drive ukuya eChico Hot Springs
Imizuzu engama-50 ukuqhuba ukuya ePine Creek Falls
50 min ukuya eLivingstone
I-1 h 20 min drive ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseBozeman/Bozeman
3.5 h drive ukuya Teton National Park
Imisebenzi ekufutshane ibandakanya ukukhwela intaba, ukukhwela intaba, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ukuzingela, ukukhwela ihashe, ukukhwela ihashe, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibilika ekhephini, ukuhambahamba ekhephini nokunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Olga & Noah
Nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Sikwinkonzo yakho ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono!